Bafisa kumpontshwe igazi kovuvukalelwa yisandla ngokweqile - Ilanga News
Home Izindaba Bafisa kumpontshwe igazi kovuvukalelwa yisandla ngokweqile
Sekuzanywe okwesintu nodokotela kodwa ingane kayisizakali
INZIMA impilo yomfanyana waseNkolokotho, eMtubatuba obhekene nenkinga yokuvuvukalelwa yisandla, okuyinkinga asephile nayo iminyaka. UNkz Nomusa Nene onguninakhulu ka-Amkelani Nene (11), uthi selokhu azalwa umzukulu wakhe, uphila nayo le nkinga. Uthi usegqigqe ezibhedlela ezahlukene zikahulumeni kodwa akalutholi usizo. Le nkinga uthi yaqala isencane le ngane kusaphila nonina wayo ongasekho emhlabeni. Kusolakala ukuthi yazalwa nayo. Uninakhulu uthi abahlengikazi nodokotela bathi kabazi ukuthi idalwa yini. Uthi isifiso sakhe wukuba kudonswe igazi, futhi usezinikele ekutheni kungenziwa noma yini esandleni ngoba uyahlukumezeka umzukulu, uma kuzoshintsha isimo sezulu.
“Kwaqala ngokuthi kuvele ibala esandleni engakaqali ngisho ukuhamba. Okukhathaza kakhulu ngalesi sandla wukuthi siyaye sibe nezikhathi lapho ekhala khona ngobuhlungu obungabekezeleleki. “Ukhala ngokuthi siyashisa kugcine sekushisa umzimba wonke. Ngezinye izinsuku ubuya naso esesithwele ekhanda ngenxa yobuhlungu,” kuchaza yena. Uthi abanye abantu bameluleka ngokuthi kufanele athole odokotela abazimele okungenzeka ukuthi bakwazi ukuyixazulula inkinga yomzukulu wakhe. “Sengihambele izibhedlela eziningi, ikakhulukazi eThekwini, kodwa lutho ukuthola usizo. Kwezinye bengifike kuthiwe ma-ngisayine amaphepha avuma ukuthi kwenziwe noma ngabe yini ezokwenza ukuthi umzukulu wami asinde.
“Ngiyakwenza konke abakushoyo kodwa akasindi. Nami iyangihlukumeza le nto ngoba akukho engingakuzamanga, njengoba nakubantu besintu ngizamile behluleka nabo. Isandla nje sisonke kusebenza iminwe emibili kuphela. “Ngicela noma ngabe ngubani ukuba elule isandla, ngikwazi ukuhambisa umzukulu esibhedlela esizimele,” kusho uNkz Nene. Okhulumela uMnyango weze Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Mdu Ncalane, uthe lena yinkinga ejwayelekile, kodwa futhi nawo lo mnyango ongakabi nalo ulwazi oluqondile lokuthi idalwa yini. Uthe kunezinhlelo ezikhona zokuyithatha ingane ihanjiswe esibhedlela esiseThekwini, Inkosi Albert Luthuli, ngoba sinodokotela abaqeqeshwe ngokusezingenzi eliphezulu futhi abakwaziyo ukubhekana nezinkinga zalolu hlobo. “Kunohlobo lomjovo azoluthola (umntwana) esibhedlela sikahulumeni Inkosi Albert Luthuli, njengoba kunodokotela abaqeqeshe-lwe ukubhekana nezifo ezifana nalesi. “Baningi abantu ababhekana nenkinga efana nayo lena kodwa futhi iyelapheka. “Maqondana nalo mfanyana sizomthatha ahanjiswe esibhedlela esinodokotela abasezingeni eliphezulu, okuyibona abazokweluleka ukuthi yini okufanele yenziwe ukuze kunqotshwe le nkinga,” kuphetha uMnu Ncalane
Previous articleBAKHUNGATHEKILE NGONYAMALALE ENDAWENI YOBUMNANDI
Next articleBakhuthaza ukuzimela ezintombini nto